သက်ဦး: အိုဘယ့် မြန်မာ... အို မြန်မာ တို့...
Posted by Thet Oo at 3:23 PM
အဲဒီလို အဖြစ်မျိုးတွေ ကျနော်လည်းမကြာခဏကြုံဖူး ပါတယ်၊ Myanmar လို့ပြောလည်းမသိ၊ Burma ဆို လည်းမကြားဖူးနဲ့...၊ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံနာမည်တွေတန်းစီ ရွတ်ပြတော့ အားလုံးသိတယ်၊ ဒါနဲ့အဲဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ အလည်မှာ ကျနော့်တိုင်းပြည်ရှိတယ်လို့လည်းဆိုရော သြော်..ဒီနိုင်ငံတွေကြားမှာ နောက်နိုင်ငံတစ်ခု ရှိသေး တာကိုး တဲ့၊ ဘုံဘဝ ကြုံရတာဖြင့်...ပေါ့ဗျာ။
အဲဒီ ယူအန်ရုံးပေါ့။ ကျွန်တော့် မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာ. မပြဘူးဗျ. အခု ပြဿနာတွေ့နေရတယ်။ ညီတူမျှတူ ခံစားခွင့် မရှိဘူး၊.. မဂ္ဂနမ်ဆိုလို့၊ ကျွန်တော် ထီပေါက်ဖူးတယ်။ မလေး ၁၂၀ ဆိုလား။ သိပ်တောင် သတိမထားမိဘူး။ နည်းလွန်းလို့ပါ။